४ वर्षदेखि थन्कियो ३३ करोडको मेसिन, क्यान्सरको रेडिएसन थेरापी ठप्प- समाचार - कान्तिपुर समाचार
४ वर्षदेखि थन्कियो ३३ करोडको मेसिन, क्यान्सरको रेडिएसन थेरापी ठप्प
५ हजार ५ सय रूपैयाँमा पाउने सेवाका लागि बिरामी निजी स्वास्थ्य संस्थामा ५ लाखसम्म तिर्न बाध्य
वीर अस्पतालको बेवास्ताले कोबाल्ट–६० को रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने मेसिन जडान हुन सकेन
मंसिर १७, २०७८ प्रशान्त माली
काठमाडौँ — चित्लाङ टिस्टुङ पालुङका ६५ वर्षीय हरिकृष्ण देउलालाई साताअघि दिसा बस्न गाह्रो भयो । क्लिनिकमा जँचाउँदा बिग्रिएका कोषिका टुक्रिएर जम्मा भएको र क्यान्सरको लक्षण देखापरेको भन्दै थप उपचारमा जान भनियो । उनी वीर अस्पताल पुगे । त्यहाँ क्यान्सरको उपचार गर्ने मेसिन बिग्रिएको भन्दै निजी अस्पताल रेफर गरेपछि उनी हरिसिद्धिको नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा छन् ।
वीरमा मेसिन बिग्रिएकै कारण एक महिनाअघि पनि उनले डेढ लाख खर्चेर निजीमा पेटको क्यान्सरको उपचार गराएका थिए । मलद्वारमा क्यान्सर भएका उनी अहिले मृत्युसँग लडिरहेका छन् । ‘रेडिएसन थेरापी (विकिरण दिएर गरिने उपचार) मार्फत कम्तीमा एक महिनासम्म उपचार गराउनुपर्छ,’ उनका छोरा भन्छन्, ‘यसका लागि चिकित्सकले दुई लाखभन्दा बढी खर्च लाग्छ भनेका छन् ।’
ललितपुर गोदावरीका ६७ वर्षीय रामबहादुर महर्जन पनि वीरमा उपचार नपाएपछि हरिसिद्धिस्थित क्यान्सर अस्पताल पुगे । उनको घाँटीमा क्यान्सर छ । ‘क्यान्सर अन्यत्र फैलिएको छ/छैन भनी जाँच गर्नमात्रै ७० हजार खर्च लाग्यो,’ उनका ज्वाइँले भने, ‘एकपटक जाँच गर्न कहिले २४ हजार त कहिले २३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार घाँटीमा क्यान्सर भएकाले अप्रेसन गर्न मिल्दैन । विकिरणमार्फत क्यान्सर भएको कोषिका नष्ट गर्नुपर्छ । यसका लागि दुईदेखि तीन महिनासम्म रेडिएसन दिनुपर्छ । ‘औषधिबाहेक उपचारमा मात्रै ३ लाख रुपैयाँ लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ,’ उनले भने ।
दोलखाकी अञ्जुदेवी श्रेष्ठ पनि पेटको तल्लो भागमा क्यान्सर भएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेकी छन् । उनका श्रीमान् हरिकृष्णका अनुसार ३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
सरकारीमा उपचार नपाएर निजीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्चेर उपचार गर्ने उनीहरूजस्तै अरू पनि छन् । रेडिएसन थेरापीमार्फत हुने यही उपचार वीरमा गराउँदा ६ साताको ५ हजार ५ सयमात्र खर्च लाग्छ । दुई सातामात्र रेडिएसन दिए पुग्ने भए ४ हजार ५ सय रुपैयाँमा उपचार गर्न सकिन्छ ।
मुलुकमा बर्सेनि २५ देखि ३० हजार क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने अनुमान छ । क्यान्सरबाटै प्रत्येक वर्ष १५ देखि २० हजार जनाको मृत्यु हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । विडम्बना, वीर अस्पतालमा क्यान्सर उपचार गर्न २५ वर्षअघि ल्याइएको ‘कोबाल्ट–६०’ मेसिन बिग्रिएपछि २०७२ देखि सेवा ठप्प छ । यहाँ रेडिएसनमार्फन उपचार गर्ने अर्को मेसिन पनि छैन । वीरमा दिनहुँ आउने करिब २ हजार ५ सय बिरामीमध्ये ३०–४० जना क्यान्सर रोगी हुने अस्पतालका अन्कोलोजी विभाग प्रमुख डा. विवेक आचार्यले बताए । तर, उपचार गर्ने मेसिन नहुँदा ६ वर्षदेखि यस्ता बिरामी निजी अस्पतालमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
२०७४ असार २९ मा आधुनिक उपकरणमार्फत गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले वीरले लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल कम्पनीसँग ३३ करोड २४ लाख १६ हजार (भ्याट बाहेक) मूल्य पर्ने टोमोथेरापी मेसिन खरिदको सम्झौता गर्‍यो । मेसिन राख्न ६ करोड ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा बंकर निर्माण र कोबाल्ट–६० मेसिनको रेडियोधर्मी पदार्थ सुरक्षित व्यवस्थापन लाइफलाइनले नै गर्ने सम्झौता थियो । आपूर्तिकर्ताले ६ महिनाभित्र मेसिनको परीक्षणसमेत गराई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, वीर प्रशासनको बेवास्ताका कारण चार वर्ष बितिसक्दा पनि कोबाल्ट–६० को रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने मेसिन जडान हुन सकेको छैन ।
आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सुरुमा पुरानो मेसिनको रेडियोधर्मी पदार्थ भारतमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको थियो । तर, नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले तोकेको मापदण्ड र यससम्बन्धी कानुन नभएको भनी भारत सरकारले त्यसमा सहयोग गरेन । त्यसपछि २०७६ फागुनमा कोबाल्ट–६० मेसिन उत्पादक क्यानडास्थित कम्पनीमै पुर्‍याएर व्यवस्थापन गरियो । क्यानडामा भन्दा भारतमा सस्तो पर्ने भएकाले पहिले भारतमै व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरिएको आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि नै स्विकार्छन् । त्यसबीचमा आपूर्तिकर्ताले एकुरे कम्पनीको टोमोथेरापी मेसिन भने २०७५ असारमै नेपाल ल्याइसकेको थियो ।
कोबाल्ट–६० को विकिरण व्यवस्थापन र मेसिन राखिएको बंकर खाली नभएकाले नयाँ मेसिनलाई तत्कालका लागि बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा राखियो । पुरानो मेसिनको रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन गर्न समय लागेपछि नयाँ मेसिन एक वर्षसम्म त्यत्तिकै थन्कियो । पछि २०७७ पुसमा मेसिन उत्पादक कम्पनीकै प्राविधिकहरू नेपाल आएर जडानका लागि जाँच गर्ने क्रममा पानी चुहिएर मेसिन खिया लागिसकेको अवस्थामा फेला परेको थियो । सशस्त्र प्रहरी स्वयम्भूका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक मन्दीप श्रेष्ठले सुरक्षाका दृष्टिकोणले मात्र बलम्बुमा राखिएको र मेसिनको कस्तो अवस्थामा छ भन्ने जानकारी नभएको बताए । त्यसो त मेसिन फेरि दिन अमेरिकी कम्पनी राजी भइसकेको छ ।
मेसिन राख्ने बंकर पनि तयारी अवस्थामा छ । तर मेसिन ल्याउन वीरका अधिकारी र आपूर्तिकर्तालाई पनि तातो लागेको देखिँदैन । वीर अस्पतालका प्रमुख डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले चाँडै ल्याउन आपूर्तिकर्तालाई ताकेता गर्दै आएको दाबी गरे । ‘सप्लायर्सले अबको ६ महिनाभित्र जडान गर्ने वाचा गरेको छ,’ उनले भने, ‘मेसिन जडान गर्न र तालिम दिन अमेरिकी प्राविधिक टोली नै आउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुने देखिएको हो ।’
मेसिन खरिद गर्ने सम्झौतायता ४ स्वास्थ्यमन्त्री र ९ सचिव फेरिइसकेका छन् भने वीरमै तीन जना प्रमुख परिवर्तन भइसके । सम्झौताका बेला अस्पतालका निर्देशक रहेका बस्नेत चार वर्षपछि पुनः गत साउनमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा वीर नै फर्किएका हुन् । लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनलका व्यवस्थापक सुरेन्द्र नायरले कोभिडलगायत कारणले समयमा मेसिन जडान गर्न नसकेको दाबी गरे । ‘सुरुमा रेडिएसन व्यवस्थापन गर्न कानुन नहुँदा ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘अहिले मेसिन ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौं ।’
चिकित्सकहरूका अनुसार मुख्यतया क्यान्सरको उपचार पाँच तरिकाले गरिन्छ । औषधि सेवन, शल्यक्रिया, विकिरणमार्फत गरिने कोबाल्ट, लिनियर एक्सिलेटर र टोमोथेरापी । त्यसमध्ये टोमोथेरापी सबैभन्दा आधुनिक उपचार प्रणाली हो । वीरमा जडान गर्न लागिएको मेसिन मुलुककै पहिलो हो । मेसिन सञ्चालन भए दिनमा ५० जनाको उपचार गर्न सकिने वीरका अंकोलोजी विभाग प्रमुख डा. विवेक आर्चायले बताए । ‘मेसिन जडान गर्न पाए गरिब बिरामी निजीमा जानै पर्दैन । धनी वर्ग त विदेशमा गएर पनि उपचार गराउँछन्,’ उनले भने । ५ लाख जनसंख्या बराबर एउटा रेडियोथेरापी मेसिन चाहिने विश्वव्यापी मान्यता छ । अस्पतालको तथ्यांकअनुसार उपचारमा आउनेमध्ये ८० प्रतिशत विपन्न वर्गका छन् ।
वीरमा क्यान्सर मेसिनमात्र होइन, १६ स्लाइसको सिटी स्क्यान, पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट र चार वटा ग्यास्ट्रो इन्डोस्कोपी मेसिन बिग्रिएर उपयोगविहीन भएका छन् । २०७७ मा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त २ करोड ५३ लाख मूल्यको फाइब्रोस्क्यान मेसिन पनि वीरले सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । सिमुलेटर मेसिन ३ वर्षदेखि थन्किएको छ । उपकरणहरू ९ महिनासम्म पनि मर्मत नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एमआरआई तथा सिटी स्क्यानको सेवा समयमै उपलब्ध नहुने समस्या पनि अस्पतालमा विद्यमान छ । ‘उपकरण र आवश्यक चिकित्सकको अभावमा न्युरो, हाडजोर्नीजस्ता शल्यक्रियाका लागि बिरामीले ३ महिनासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छ,’ २०७८ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अस्पतालले एकातिर बिग्रिएका मेसिन मर्मत गर्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ प्रत्येक वर्ष बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधारमा पनि अस्पतालले ध्यान दिन सकेको छैन । २०७७ मा भने बिरामीको उपचारमा मात्रै २ अर्ब ३३ करोड ६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको अस्पतालको भनाइ छ ।
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १२:१८
चार हजार कर्मचारीले मागे सुगम सरुवा
लोक सेवाले २०७६ मा स्थानीय तहका लागि माग गरेको अधिकृत छैटौं र त्यसभन्दा तलका प्रशासन तथा प्राविधिक तहका विभिन्न पदका ९ हजार ४ सयमध्येबाटै झन्डै चार हजारले सुगममा सरूवा हुन मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
मंसिर १७, २०७८ ऋषिराम पौड्याल
काठमाडौँ — मर्कामा परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डलाई आधार बनाएर झन्डै चार हजारले सरुवा मागेपछि दुर्गमका स्थानीय तह खाली हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । २०७६ मा स्थानीय तहका लागि सेवा प्रवेश गरेकामध्ये चार हजारले सुगममा सरुवा माग गरेपछि मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले मापदण्डलाई आधार बनाएर सरुवा माग गरेको पुष्टि गरे । उनले मागअनुसार सरुवा गर्ने हो भने दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने उनले बताए । ‘हामीले केही व्यावहारिक समस्या हल गर्न मापदण्ड बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिएको हो ।’
लोक सेवा आयोगले २०७६ मा स्थानीय तहका लागि माग गरेको अधिकृत छैटौं र त्यसभन्दा तलका प्रशासन तथा प्राविधिक तहका विभिन्न पदका ९ हजार ४ सयमध्येबाटै झन्डै चार हजारले सुगममा सरुवा हुन मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् । लोक सेवाले कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा स्थानीय तहमै काम गर्नुपर्ने भनिएको थियो तर मन्त्रालयले त्यतिबेला सम्बन्धित तह तोकेको थिएन । संघीय मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले प्रदेश तोके पनि कुन स्थानीय तहका लागि हो भन्ने यकिन नगरेकाले अहिले सरुवाको समस्या आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आयोगले पदपूर्तिका बेला मन्त्रालयलाई कर्मचारी खटिने स्थानीय तह तोक्न अनुरोध गरेको थियो तर मन्त्रालयले आवश्यक नभएको भन्दै आन्तरिक रूपमा आफूहरूले मिलाउने जानकारी आयोगलाई दिएको थियो । ‘अहिले त्यसकै मार खेपिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘सबै कर्मचारीले हाल कार्यरत स्थानीय तहबाट सुगमा सरुवा मागेपछि दुर्गममा कसले काम गर्छ ?’ तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका केही उच्च तहका कर्मचारीले लोक सेवाको अनुरोध नटेर्दा यो समस्या आएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यतिबेला प्रदेशले गर्नुपर्नेमा संघले नै पदपूर्ति गर्न खोज्नु गलत भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
त्यतिबेला कर्मचारी अपुग भएको भन्दै स्थानीय तहले संघीय मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेपछि पदपूर्ति गरिएको थियो । स्थानीय तहमा २० हजार कर्मचारी रिक्त रहेकाले उनीहरूलाई कतै न कतै मिलाउन सकिने तर्क मन्त्रालयले गरेको थियो तर भविष्यमा आउने समस्या ख्याल नगरी हचुवामा निर्णय गर्दा अहिले मन्त्रालय नै अनिर्णयको बन्दी बनेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले सहायक स्तरका कर्मचारीको स्थानीय तोकेरै पठाएको जानकारी दिए । उनले त्यसभन्दा बाहेकका पदहरू मन्त्रालयले नै मिलाउने भनेपछि एकमुष्ट पठाएको जानकारी उनले दिए । कुन तहमा खाली छ र ककसले तत्काल माग गर्छन् सोही आधारमा खटनपटन गर्ने सर्तमा मन्त्रालयकै अनुरोधमा एकमुष्ट कर्मचारी पठाएको हो, सुवेदीले प्रस्ट्याए । यि समस्या मिलाउने जिम्मेवारी कर्मचारी मागको अनुरोध गर्ने मन्त्रालयको भएको उनले बताए । मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराएका कारण सरुवा बदर गर्ने अवस्था आएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।
मर्का परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै २०७७ सालमा तत्कालीन संघीय मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटाबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न मिल्ने मापदण्ड बनाएका थिए । व्यावहारिक समस्यामा परेका भन्दै मन्त्री ठगुन्ना नेतृत्वले चार सय कर्मचारी सरुवा गरेको थियो । मापदण्ड बनाएर सरुवा खुकुलो बनाएको मौका छोपेर कर्मचारीले निवेदन दिएका हुन् । मापदण्डमा आउने र जाने दुवै स्थानीय तहले सहमति दिनुपर्ने उल्लेख छ तर कर्मचारी धेरै भएका काठमाडौं, भरतपुर, विराटनगरजस्ता नगरपालिका र सुगमका गाउँपालिकाले जथाभावी सहमति दिँदा मन्त्रालय थप समस्या परेको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आफ्नो स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भए पनि सरुवा सहमति दिन नछाड्ने जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारका कारण पनि जटिलता थपिँदै गएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । कतै कर्मचारी अभाव, कतै चाहिनेभन्दा बढी थुप्रिने अवस्था देखिएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अप्ठेरो अवस्था आएपछि समस्या सल्ट्याउन गत वैशाखदेखि नै सरुवा रोकिएको छ ।
सरुवा गर्दागर्दै मन्त्रालयले २०७७ वैशाख १७ भित्र सरुवा हुन चाहनेले निवेदन दिनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । मर्का पर्नेलाई निवेदन मागेरै सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेपछि झन्डै ३५ सयले थप निवेदन दिएका हुन् । दुर्गम खाली हुनेगरी निवेदन आउन थालेपछि गत वैशाखदेखि नै सरुवा रोकिएको छ । मन्त्रालयका एक सहसचिवले स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई फेरि खटनपटन गर्ने मापदण्ड बनाउनु नै गलत भएको बताए । प्रवक्ता अधिकारीले संघीय निजामती ऐन बनाउने क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘ऐनले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्छ,’ उनले भने ।